China Sirivha yakaputirwa polyamide inoitisa / inodzivirira machira vagadziri uye vanotengesa | 3L Magwaro
Kurema: 110g ± 5g
Kurapa kuripo: Anti-oxidation kurapwa
Min.Order Uwandu: 120M
Zvinhu Zvikuru: Yakanyanya yakaderera kuramba, inodzivirira yemagetsi mafungu, anti-radiation, antibacterial, deodorant (ramba), bvisa yakamira static magetsi, mhasuru inomutsa, gadzirisa tembiricha yemuviri, anti-UV, yakasvibirira girini, yakakwira mweya kukwana
Sirivha yakachena yakavharwa polyamide jira
Iyo yakanakisa yekudzivirira inodzivirira machira ane antibacterial mashandiro, sirivheri yakaputirwa pane poly amide / nylon base zvinhu, zvakanyanya kupfeka nemishonga, yakapfava uye yakasununguka. Icho chigadzirwa chepamusoro-soro chinowanikwa nekusunga zvachose sirivheri kuchinhu cheyiloni kuburikidza nehunyanzvi hwemberi nzira. Ichi chimiro hachisi chega chinoita kuti sirivheri fiber ichengetedze iyo yepakutanga machira chivakwa, asi zvakare inopa zvese iro mashiripiti basa, mhedzisiro yesirivheri. Sechinhu chakasikwa chaizvo, sirivheri ine hutano zvachose, zvakatipoteredza / girini uye kuchengetedza.
Main Feature: Kunyanya kushomeka kushomeka, kudzivirirwa kwakanyanya kuita, kudzivirira magetsi emagetsi, anti-radiation, antibacterial, deodorant (kuramba), kubvisa magetsi emagetsi, kukurudzira mhasuru, kudzora tembiricha yemuviri, anti-UV, girini yakasikwa, kukwirira kwemhepo, kuchinjika / kugadziriswazve. Kupenya, silika nyoro kunzwa.
Main Mafomu: Yakakwana zvinhu zvekudzivirira, anti-radiation, zvipfeko zvine hungwaru, zvishongedzo uye machira epamba, zvipfeko zvinorwisa mabhakitiriya, masiki, magurovhosi uye machira epamba, zvigadzirwa zvekurapa, zvemitambo, kuwana mhasuru, zvinogadzirwa, anti-static zvigadzirwa.
Frequency renji uye kudzivirira kushanda zvakanaka:
Kudzivirira kushanda: 60.0dB-71.0dB
Anti-remagetsi chinozunguzirwa kudzivirirwa musimboti:
Sirivheri inoitisa zvine mutsindo uye ine electromagnetic inodzivirira basa. Kana vanhu vakapfeka anti-electromagnetic wave zvipfeko / zvishongedzo zvekubata chigadzirwa chemagetsi, iyo inopesana nemagetsi magetsi zvipfeko zvinogona kukurumidza uye zvinobudirira kuitisa magetsi emagetsi, nokudaro ichidzivirira muviri kubva kumagetsi emagetsi.
Antibacterial Mhando: hutachiona hunotapukirwa nehutachiona - Covid-19, H1N1, Flu, candida albicans, staphylococcus Aureus, eschenchia coliform nezvimwewo.
Nheyo: Mucheka wesirivheri unoburitsa ioni dzesirivheri dzinozotora protein enzyme pamusoro pebhakitiriya uye zvimwe zvipuka, nokudaro ichiparadza chimiro chebhakitiriya, ichikanganisa kurarama kwayo, uye ichizadzisa chinangwa cheanorwisa mabhakitiriya.
Sirivha ions inogona kuuraya 99.99% hutachiona hutachiona neiyo nzira yekufema, Covid-19, H1N1, dzihwa mumaminetsi. Mhedzisiro yemubvunzo kubva kuInstitute of Microbiology uye Epidemiology yeChikamiro cheMasoja Medical Sayenzi inoratidza kuti iyo antiviral machira inogona kuuraya kana kudzvinyirira furuwenza A uye furuwenza hutachiona munguva pfupi.
Inimprove kutenderera kweropa: Sirivheri faibha inogona kusimudzira microcirculation, hunyoro uye sweat yekumwa, inogona kunyatso kuvandudza kufamba kweropa Anofema antibacterial masokisi ekurapa, mabvi, mabhendi (Kune Varicose mutsinga, chirwere cheshuga, arthritis)
Tsvina Inokurudzira: nokuti kurapwa kwekusimudzira electrode, tsandanyama inosimudzira mukusimba.
Smart /akangwara Switch Produts:
Nesimba rakanyanya kunzwisisika, jira redu resirivheri rinoshandiswa zvakanyanya muzvinhu zvine hungwaru zvekunzwa, zvipfeko zvemukati zvakangwara, zvipfeko, zvishongedzo uye machira epamba.
Pashure: Sirivha yakaputirwa spandex inoitisa / inodzivirira machira
Zvadaro: RFID Inoitisa Mesh
Sirivha yakaputirwa conductive / inodzivirira machira
Yakatarisana nesirivha conductive machira
Double akatarisana moto nemishonga conductive jira
Sirivheri Gloves (antibacterial / kuuraya mavhairasi)